Sidee loo helaa ereyada muhiimka ah ee liisaska liiska Amazon?
Looma baahna in la yiraahdo haddii aad iibinayso Amazon, waa in aad horey u leedahay wax badan oo aad ku maareyn karto, aad u badan oo aad maareyn karto, iyo waliba si aad u badan oo aad ula socoto si aad ugu noolaato tartan dhab ah oo lagu xukumo halkaas. Oo hawsha aad ku heli laheed ereyada muhiimka ah ee liiskaaga Amazon maaha ka saarid sharcigan fudud. Waxaan ula jeedaa mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid aad u adag in la aqoonsado odhaahyada raadraaca ah ee sarreeya iyo keywords bartilmaameedka ugu weyn si loo geliyo liiska Amazon ee runtii iibin - free bingo games cash no deposit. Oo aynu wajahno - waxaad u baahan doontaa qalab gaar ah oo gaar ah oo ku habboon oo kaa caawiya arrintaas. Nasiib wanaag, waxaa jira helitaanka baaxad weyn ee qaababka internetka ee kala duwan iyo qalabka software loogu talagalay in lagu ordo cilmi baaris qotodheer si aad u hesho xulashada ugu dambeysa ee ereyada muhiimka ah ee wadista baabuurta Amazon ee ugu sareysa raadinta sheyga. Laakiin sida loo sameeyo doorasho sax ah oo ka mid ah miisaaniyada oo ah bandhigyo muuqda oo wanaagsan oo la heli karo oo u furan shabakadda internetka? Waa kuwan qaar xalal ah oo la isticmaalo oo kaa caawiya inaad qaadato doorashada saxda ah, ama ugu yaraan hoos u dhicid wax yare.
1. Kormeeraha Muuqaalka - waa qalabkii ugu horreeyay ee aan jeclaan lahaa inaan ku tuso maanta. Caawinaha online-ka ah ayaa si aan kala sooc lahayn u dooranaya xulashada ugu sareysa ee keywords keywords ee Amazon liiska. Iyada oo ka mid ah dhinacyada ugu xooggan, waxaan rabaa in aan muujiyo muuqaalkan aad u faa'iido leh oo u ogolaanaya in la helo jeeg dhaqso ah oo la arko dhamaan ereyada muhiimka ah iyo raadinta dheeraadka ah ee ereyadaada ama nambarkaaga sheygaaga ah ee horayba u xushay. Intaa waxaa dheer, Kormeeraha Keyword dhab ahaantii wuxuu u taagan yahay gebi ahaanba qalab wanaagsan, si uu u noqdo mid sax ah. Taas waxaa ka mid ah Amazon Suggestion Tool (si laguu caawiyo si dhakhso ah u aqoonsato dhamaan ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah ee ku guuleysta), Tester of Indexation (si loo hubiyo in ereyada muhiimka ah laga soo qaaday liiska Amazon in si buuxda loo dhajiyay si ay dhab ahaantii u heli karaan dukaanlayda nool) , iyo Wareegga Wareegga Wareegga (oo kaa caawinaya sidii aad u kordhin laheyd guud ahaan khadka guud ee raadinta shabakadda).
(2) (2) 2. Ereyada Ganacsi - waa hab kale oo wanaagsan oo kaa caawiya inaad si dhakhso ah u heshid ereyada raadinta dhabta ah ee dadka isticmaala noloshooda maalin walba dukaamaysiga oo kaliya maaha Amazon laftiisa, laakiin inta kale ee goobaha caanka ah iyo shabakadaha kale ee ganacsiga meelo kale oo internetka ah (tusaale, Walmart ama Jet). Aniga ahaan, aniga ahaan, waxaan shakhsi ahaantii helay qalabkan si dhab ah uga faa'iideysanaya helitaanka sawir weyn oo ah ereyada niche leh fikrado aad u qiimo badan oo ku saabsan isticmaalka wax ku oolka ah. Ugu dambeyntii, Ereyada Merchant waxay u muuqdaan inay si weyn u fiican yihiin si ay u helaan ereyada la midka ah iyo erayada raadinta ee la xidhiidha oo ay dhici karto in lagu guuleysto, weli wali ka muuqan waayo qaybta libaax ee iibka firfircoon ee Amazon.
3. Dabagalka Jungle - waa qalabka kama dambaysta ah, kaas oo aan dabooli karin cilmi-baarista muhiimka ah ee wax ku oolka ah oo leh talooyin tartan ah. Maxaa ka badan - doorashadani waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh marka ay timaado alaabada caanka ah ee ugu caansan ee lagu iibiyo Amazon, iyo sidoo kale niches si xoog leh lagu taliyey kuwaas oo ku jira ugu sarraysa ee sumcadooda ay u tahay daqiiqad. Intaa waxaa dheer, iyada oo xogta ballaadhan, Jungle Scout waxay bixin kartaa dhammaan jaangooyooyinka muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah inaad markasta qaadato oo kaliya marin habboon oo ku salaysan xogta iyo xogta, oo laga yaabo in marxalad kasta oo ka mid ah sheygaaga liiska liiska horumarinta. U fiirso, si kastaba ha ahaatee, in qalabkani yahay mid dhab ah oo aad u sareeya, loogu talagalay in badan oo iibiyeyaashu hore u leeyihiin khibrad aasaasi ah ee arimahan.